‘कथा काठमाण्डु’को नयाँ गीत सार्वजनिक, प्रियंका र प्रमोद उस्तै रुपमा ! (भिडियो) - Koshi Online
‘कथा काठमाण्डु’को नयाँ गीत सार्वजनिक, प्रियंका र प्रमोद उस्तै रुपमा ! (भिडियो)
विराटनगर, साउन २४, अशोज १२ गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म ‘कथा काठमाण्डु’को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । पहिलो गीतबाट विवादित् र आलोचित बनेका प्रियंका र प्रमोद भने यस गीतमा पनि उस्तै भूमिकामा देखिएका छन् ।
‘जुन अनि तारालाई’ बोलको सो गीतमा चलचित्रका शीर्ष कलाकारहरुलाई देखाइएको छ । प्रियंका, प्रमोद, आयुष्मान, सन्जोग कोइराला, सन्ध्या केसी र प्रेक्ष्या अधिकारीलगायत सबै कलाकार यस गीतमा देख्न सकिन्छ ।
गीतमा सुगम पोखरेलको आवाज छ भने दिपेश सुब्बाको संगीत रहेको छ । शव्द इशान सुब्बाको र संकलन मोहित कुनालले गरेका छन् ।
संगीता श्रेष्ठको स्क्रिप्ट, लेखन तथा निर्देशन रहेको यस फिल्मलाई विजय राईले निर्माण गरेका छन् ।
यसअघि इन्दिरा जोशीको आवाजमा रहेको ‘रातको कुरा’मा अन्तरंग दृश्य देखाएपछि विवादित् र आलोचित बनेका प्रमोद अग्रहरी र प्रियंका कार्की अहिले मिडियामा खुबै छाएका छन् । यही कारण पनि फिल्मलाई फाइदा हुने देखिएको छ ।